आईपीएल : मुम्बईसँग कोलकता ८ विकेटले पराजित Canada Nepal
आईपीएल : मुम्बईसँग कोलकता ८ विकेटले पराजित
क्यानाडानेपाल डेस्क कार्तिक १ २०७७
काठमाडौं - शुक्रबार राति इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत भएको खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले जित निकालेको छ ।
यूएईमा सम्पन्न उक्त खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले कोलकता नाइटराइडर्सलाई ८ विकेटले पराजित गरेको हो । मुम्बईको यो जित छैठौं हो ।
खेलमा कोलकत्ताले दिएको १ सय ४९ रनको लक्ष्य पक्ष्याएको मुम्बईले १६ ओभर ५ बलमा २ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कोलकताले २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै एक सय ४८ रन बनाएको थियो ।
उक्त खेलमा मुम्बईका लागि क्विनटन डी ककले अविजित रहदै ७८ रन र हार्दिक पाण्डेयले २१ रन थपे।
त्यस्तै कोलकाताका लागि पाट कुमिन्सले अविजित रहदै ५३ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । त्यस्तै बलिङ तर्फ राहुल चाहरले दुई विकेट लिए ।जितसँगै मुम्बईको १२ अङ्क भएको छ
कार्तिक १, २०७७ शनिवार ०७:५२:५७ बजे : प्रकाशित
रोमाञ्चक खेलमा चेन्नई सुपरकिंग्सले हरायो कोलकातालाई, मुम्बई इन्डियन्स प्ले अफमा
एजेन्सी । युएईको दुबईमा बिहीबार राति भएको खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई पराजित गरेको छ ।
कोलकाता पराजित भएसँगै मुम्बई इन्डियन्स प्ले अफमा पुगेको छ । कोलकाताको प्ले अफमा पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
दुबई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा कोलकाताले दिएको १ सय ७३ रनको लक्ष्य चेन्नईले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर पुरा गर्‍यो ।
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रवार ०९:३३:१३ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ : नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका चार खेलाडी कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले बिहिबारदेखि प्रशिक्षणमा बोलाइएका ३४ खेलाडीमध्ये चार जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको जनाएको छ ।
कोरोना देखिएका चारै खेलाडी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन् । नेपालले बङ्गलादेशसितको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बिहिबारदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरु भएको प्रशिक्षणमा ३० खेलाडी उपस्थित भएका थिए ।
नेपालले बङ्गलादेशसित ढाकास्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल यही कात्तिक २८ गते तथा दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आगामी मङ्सिर २ गते खेल्ने तय भएको एन्फाले जनाएको छ । एन्फाले खेलाडीलाई त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा राखेको छ । प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले एन्फालाई अनुमति दिएको हो । नेपालले बाल गोपाल महर्जनको नेतृत्वमा तयारी सुरु गरेको छ ।
मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिन स्विडेनमा रहेकाले एन्फाले महर्जनलाई टिम हेर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । टोलीको सहायक प्रशिक्षकमा किरण श्रेष्ठ र गोलकिपर प्रशिक्षकमा विकास मल्ल रहेका छन् । फिफा विश्वकप छनोटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो । रासस
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रवार ०७:२४:२० बजे : प्रकाशित
आफ्नो जीवनमा आधारित चलचित्रबारे उत्पन्न विवादका विषयमा मुथैया मुरलीधरन के भन्छन् ?
दक्षिण भारतमा व्यापक विरोध भएसँगै मुख्य अभिनेता पछि हटेको भए पनि आफ्नो जीवनमा आधारित चलचित्र सार्वजनिक हुने श्रीलङ्का प्रख्यात पूर्वक्रिकेट खेलाडी मुथैया मुरलीधरनले बताएका छन्। बीबीसीकी नलिनी शिवथासनले मुरलीधरनसँग कुराकानी गर्दै चलचित्रबारे विवादको व्याख्या गरेकी छन्।
"क्रिकेटमा मात्रै होइन, म धेरै विषयमा विवादमा परेको छु। मैलै धेरै अवरोधहरू पार गरेँ। यो मैले सामना गरेका धेरै चुनौतीमध्ये एक हो," चलचित्रबारे देखिएको विवादका विषयमा बोल्दै ४८ वर्षीय मुरलीधरनले भने।
श्रीलङ्कामा अल्पसङ्ख्यक तमिल समुदायका सदस्य मुरलीधरनले लामो समयसम्म चलेको गृह युद्धबीच राष्ट्रिय टोलीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएका थिए। त्यहाँ पृथकतावादी तमिल र बहुसङ्ख्यक सिन्हाला समुदायका सुरक्षा फौजबीच लामो समयसम्म युद्ध चलेको थियो।
क्रिकेट जगत्‌मा सबैभन्दा प्रभावशाली बलरका रूपमा स्थापित हुनुअघि बलिङ् गर्ने तरिकालाई लिएर उनले विवादको सामना गर्नुपरेको थियो। तर एट हन्ड्रेड (८००) नाम दिइएको उनको जीवनमा आधारित चलचित्र भने उनका लागि हालसम्मकै ठूलो अवरोध हुन सक्छ।
टेस्ट क्रिकेटमा उनले ८०० विकेट हात पारेका छन् जसकारण चलचित्रको नाम पनि एट हन्ड्रेड राखिएको छ। उक्त चलचित्रको छायाङ्कन सुरु भइसकेको छैन। दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय सेतुपति मुरलिधरनका रूपमा देखिएको पोस्टर सार्वजनिक हुनासाथ तीव्र विरोध देखिएको थियो।
निर्माताहरूले चलचित्रलाई युवाहरूलाई प्रेरणा दिने "स्पोर्टस बायोग्राफी" भनेका छन्। तर आलोचकहरूले भने राजनीतिक रूपमा विवादित व्यक्तिको प्रशंसा गर्न खोजिएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
गत वर्षको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका बेला मुरलीधरनले गरेको टिप्पणीका कारण धेरै आक्रोश देखिएको थियो। उनले सन् २००९ मा समाप्त भएको युद्धको खुसियाली मनाउँदै एकजना प्रतिस्पर्धी गोटाबय राजपक्षलाई समर्थन गरेका थिए।
सरकारले तमिल पृथक्तावादी विद्रोहीहरूलाई सखाप पार्ने गरी चलाएको कारबाहीका बेला राजपक्ष श्रीलङ्काका रक्षामन्त्री थिए। उक्त कारबाहीमा दशौँ हजार सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो।
युद्धको अन्तिमतिर करिब ४०,००० तमिल सर्वसाधारणको मृत्यु भएको विश्वास गरिन्छ र समान भाषा अनि जातीय पहिचान बोकेको तमिलनाडुमा यो भावनात्मक विषय बनेको छ। "मुरलीधरन तमिल भए पनि उनी तमिलजस्तो व्यवहार गर्दैनन् र हामी उनी कुनै पनि हिसाबले तमिलनाडु प्रवेश नगरून् भन्ने चाहन्छौँ - त्यो चाहे व्यक्तिगत रूपमा होस वा चलचित्रका रूपमा," चेन्नईस्थित एक युवा अधिकारवादी भी प्रभाले भने।
"सन् २००९ पछि यो देशमा शान्ति प्राप्त गरेका थियौँ भन्ने मेरो भनाइको मतलब थियो। जब युद्ध समाप्त भयो त्यो मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको दिन थियो किनकि शान्ति स्थापित भएको थियो - तमिल सर्वसाधारण मारिए भनेर होइन," आईपीएल प्रतियोगितामा सनराइजर्स हैदराबाद टोलीको बलिङ्ग कोचका भूमिका निर्वाह गरिरहेका मुरलीधरनले दुबईबाट भने।
"मैले युद्धमा कसैको पक्ष लिइनँ - राजपक्ष पक्ष वा अर्को पक्ष। म बीचमा थिएँ। श्रीलङ्कामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा भारतका मानिसहरूलाई थाहा छैन।" मुरलीधरनको भारत र विषेशतः तमिलनाडुसँग नजिकको सम्बन्ध छ। उनकी श्रीमती तमिलनाडुकी हुन र उनी सन् २००८ देखि २०१० सम्म आईपीएल प्रतियोगितामा चेन्नई सुपर किङ्ग्सलाई प्रतिनिधित्व गर्थे।
त्यसो भए चलचित्र किन यति धेरै विवादित बन्यो त?
"सन् २०१० मा तमिलनाडुका मानिसहरूलाई श्रीलङ्काको गृह युद्धमा तमिलहरूमाथि के भयो भन्ने थाहा थियो तर उनीहरूले यस विषयमा मुरलीधरनलाई जोडेनन्," प्रभाले भने। "त्यसपछि हामीले उनले कसरी श्रीलङ्का सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा देखाउन अभियान सुरु गर्‍यौँ र सन् २०१३ सम्ममा हामी मुरलीधरन र श्रीलङ्काका अन्य खेलाडीमाथि यहाँ प्रतिबन्ध लगाउन सफल भयौँ।"
चेन्नईस्थित एक स्वतन्त्र पत्रकार कविता मुरलीधरनका अनुसार उक्त चलचित्रबारे तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनुको कारण ४२ वर्षे अभिनेता विजय सेतुपति हुन।
"सेतुपतिलाई प्रगतिशील अभिनेताका रूपमा हेरिन्छ। उनी धेरै सामाजिक मुद्दामा बोल्ने गर्छन् जस कारण धेरै मानिसलाई उनले मुरलीधरनको अभिनय गरेको हेर्न विषय पिडादायी बनेको थियो," उनले भनिन्।
"तमिलनाडुका मानिसहरूले चलचित्रलाई गम्भीर रूपमा लिने गर्छन्। त्यहाँ चलचित्रलाई चलचित्रका रूपमा मात्रै हेरिँदैन - तमिल चलचित्र र राजनीति एकआपसमा सम्बन्धित छन्।"
उक्त चलचित्रबाट पछि हट्न सेतुपतिलाई आफ्ना सहकर्मी अभिनेता अनि नेताहरूले दबाव दिएका थिए। तर अन्तिम निर्णय भने मुरलीधरनको आश्चर्यजनक हस्तक्षेपका कारण भएको हो। उनले ती अभिनेतालाई पछि हट्न आग्रह गरे।
"यो चलचित्रका कारण सेतुपतिलाई किन अनावश्यक समस्या हुनुपर्‍यो? यी समस्याहरू म उनीमाथि किन राख्न चाहन्छु?" उनले प्रश्न गरे। "यो मेरो लडाइँ हो, उनको होइन। त्यसैले म आफैँ लडाइँ लड्नेछु।"
कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार १५:०८:४५ बजे : प्रकाशित
# मुथैया मुरलीधरन
यूईएफए च्याम्पियन्स लिग : पीएसजीको जित
काठमाडौं । बुधबार राति यूईएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत भएको खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)ले सानदार जित निकालेको छ ।
निकै रोमान्चक बनेको उक्त खेलमा पिएसजीले इस्तानबुल बासाकसेहिरलाई २-० गोलले पराजित गरेको हो ।
उक्त खेलमा पिएसजीका लागि मोइस कीनले नै दुई गोल गरे । खेलको ६४ र ७९औ मिनेटमा मोइस कीनले गोल गरी पिएसजीलाई जित दिलाए । जितसँम्गै पिएसजीको २ खेलमा ३ अंक रहेको छ ।
कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार ०९:२७:५३ बजे : प्रकाशित
च्याम्पियन्स लिग : चेल्सीको सानदार जित
काठमाडौं - गए राति च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत भएको खेलमा चेल्सीले सानदार जित निकालेको छ ।
निकै रोमान्चक बनेको उक्त खेलमा चेल्सीले एफके क्रानोडरलाई ४-० गोलले पराजित गरेको हो । उक्त खेलको पहिलो हाफमा नै चेल्सीले अग्रता पाएको थियो ।
खेलको ३७ औँ मिनेटमा चेल्सीका कालम हड्सन ओडोइले गोल गरी टिमलाई अग्रता दिलाए ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा खेलको ७६ औँ मिनेटमा चेल्सीका टिमो वेर्नरले गोल गरी टिमलाई अग्रता दोब्बर बनाए । उनले पोनाल्टीमा गोल गरेका हुन् ।
त्यसपछि खेलको ७९ औँ मिनेटमा हकिम जियचले र ९० औं मिनेटमा क्रिष्टियन पुलिसिकले गोल गरी चेल्सीलाई जित दिलाए । जितसँगै चेल्सीले चार अंक बनाएको छ ।
कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार ०८:३३:३८ बजे : प्रकाशित
च्याम्पियन्स लिग : बार्सिलोनासँग युभेन्ट्स पराजित
काठमाडौं - बिहिबार राति च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत भएको खेलमा बार्सिलोनाले सानदार जित निकालेको छ ।
निकै रोमान्चक बनेको उक्त खेलमा बार्सिलोनाले इटालियन च्याम्पियन युभेन्ट्सलाई २-० गोलले पराजित गरेको हो । उक्त खेलको पहिलो हाफमा नै बार्सिलोनाले अग्रता पाएको थियो ।
खेलको १४ औं मिनेटमा बार्सिलोनाका डेम्बेलेले गोल गरी टिमलाई अग्रता दिलाए ।
त्यसपछि खेलको ९१ औं मिनेटमा कप्तान लियोनल मेस्सीले गोल गरे । उनले पेनाल्टीमार्फत गोल गरेका हुन् ।
जितसँगै बार्सिलोना दुई खेलमा ६ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने युभेन्ट्स तीन अंक रहेको छ । युभेन्ट्सका रोनाल्डोलाई कोरोना सक्रमण भएपछि टिमलाई नोक्सान पुगेको छ ।
कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार ०८:१३:४८ बजे : प्रकाशित